BOSS, iyo inoshanda system iyo India ichashandisa | Linux Vakapindwa muropa
Nguva pfupi yadarika takagamuchira nhau kuti India icharega kushandisa Windows munyika yayo, zvirinani maererano neHurumende yenyika. Ichi chiyero hachizi chitsva sezvo dzimwe nyika dzakatotaridza izvo zvakafanana zvinangwa, seChina. Zvisinei, India haina kutara zuva chairo asi nzvimbo yakatarwa: ese makomputa.
Iyo inoshanda sisitimu yakasarudzwa yeiri basa inonzi BOSS (Bharat Inoshanda System Mhinduro) uye mumwedzi mishoma ichave iripo mune yega komputa yeHurumende yeIndia. Iyi inoshanda system yakavakirwa paDebian uye ine Gnome sedesktop default.
Parizvino ivo vari muchikamu 6 cheBOSS uye vhezheni yega yega ine mufananidzo wevhavha, imwe yedesktop, imwe yedzidzo, mufananidzo wekumisikidza network uye yekupedzisira disk dhizaini iri Live-CD.
BOSS ichave iri default yekushandisa system yeHurumende yeIndia
BOSS iri kunongedza kune nyika yeHurumende saka kwenguva iyo iko kunyorera kwatichawana mukugovera kwakanangidzirwa kunharaunda ino uye nemabasa aya. Saka hatisi kuzowana mitambo yemavhidhiyo kana meseji maapplication iyo inosangana neiyo smartphone. Kunyangwe uchishandisa Debian sehwaro, unogona kuisa debs mapakeji nemaapplication aunoda.
Asi hazvisi zvese kushoropodzwa kwekuparadzirwa uku kwakanaka. Vazhinji misoro yebudiriro akataura izvozvo ivo vagadziri veBOSS vakarasika uye kuti kugoverwa kwayo hakupei chero chinhu kunyanya. Zvinogona kunge zviri zvechokwadi kana zvakapusa izvo zvavanotsoropodza kugovera kunodzora hupenyu hwemakumi emamirioni emamiriyoni evanhu. Panguva ino, ini pachezvangu ndinopomera izvozvo BOSS inofanira kuva nharaunda ine hushamwari sezvo ichiedza kuunganidza vese vashandisi veWindows uye Gnome 3.14 haina hushamwari zvachose kune avo vanobva kuWindows, zvinosuwisa.
Mamwe ruzivo uye kurodha - BOSS Linux
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » BOSS, iyo inoshanda iyo India ichashandisa
hahaha ndinovimba chimwe chinhu chakadai chinoitika neMexico hahaha, iyo sisitimu inotaridzika kunge inonakidza ... ndinofanira kuzviedza
Pindura kuna melek